Fahantrana amin'ny adolesan | Education | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Amin'ny fahamaotiana, avelao izy hanohana azy
Fiarovana amin'ny safidy malalaka
Tsy mihatra amin'ny ray aman-dreny tsy mbola vonona, farany Mbola tsaroako foana ianao na dia manao azy ho andro tsy mitsaha-mitombo-lasa, nefa tsy mahatsapa ny maro maimaim-poana toy ny latsaka - ny iray matetika antsoina hoe mahatsapa ho toy ny ray aman-dreny toy izany, nefa izany tsy afa-manoatra. Ny fanontaniana dia mazava ho any an'io fotoana io L'Âge d'Or Lota fanadinoana, izay tena zava-tsarotra na ho an'ny ankizy, fa vao mainka izany ho an'ny ray aman-dreny.
Ny fahantrana dia dingana fampivelarana manan-danja
Lasa zatovo ny ankizy ary lasa olon-dehibe tsy miankina amin'ny farany. Ny ray aman-dreny matetika dia sarotra aminy ary ny fihetseham-pon'ny fianakaviany dia tsy mahavita zavatra mora kokoa.
Aleho any amin'ny kindergarten
Rehefa teraka ny zazakely iray, tsy misy mieritreritra fa ny zavaboahary dia handray ny natiora mandritra ny volana vitsivitsy ary mifantoka amin'ny fivoarana manontolo amin'ny famelana handeha.
Manomboka amin'ny dingana voalohany mankany amin'ny fidirana ao amin'ny akanin-jaza - ny fisarahana ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia miantsena, fa tsy tokony hijanona mihitsy.
Ny fizarana voalohany dia tonga amin'ny farany amin'ny fitsidihana maromaro mankany amin'ny Landschulheim amin'ny kilasy dimy. Ankizy maro no matahotra izany, nefa manahy ihany koa ny ray aman-dreny: Efa ampy ny zanako ve? Ahoana raha marary na marary izy? Inona no hitranga raha misy olon-kafa manenjika azy?
Ireo tahotra rehetra ireo anefa dia tokony hanafina tsara ny ray aman-dreny amin'ireo ankizy ary amin'ny fahatokisan-tena amin'ny heviny izay azonao atao! Tena ratsy tokoa ny mandrara ny ankizy tsy hatahotra, noho izany dia manome azy ireo traikefa lehibe sy miavaka, fampivelarana ary fahafinaretana be!
Ary indray andro any dia ho any izy! Ny fahamaotinana dia tonga voalohany amin'ny fantsona kely, zanaka tampoka mifanohitra, ka mety ho lasa bibidia ilay anjely kely kely indraindray. Ny zazalahy, saingy ny ankizivavy ihany koa, dia mihataka tampoka hatrany hatrany, manalavitra ny fon'ny fianakaviany.
Mandratra ity dingana ity, saingy ilaina amin'ny fandrosoana ara-pahasalamana. Ny faritr'ireo namana dia mihahery hatrany rehefa mandao ny fianakaviana. Ny hevitr'ireo namana momba anao dia lasa zava-dehibe kokoa noho ny hevitry ny ray aman-dreny, fara-faharatsiny farafaharatsiny.
Satria na dia tsy tian'ireo ankizy aza ny miaiky izany, dia fantany fa ny fiarovana ny tokantrano dia toerana azo antoka sy azo antoka ho azy ireo. Ny tanora dia mangataka fahatsapana toy ny tsy nisy teo aloha, ary matetika dia manao fihetsika feno fitiavan-tena ka mahatonga ny fahatakarana takiana ho lasa hery ho an'ny ray aman-dreny.
Ny tanora dia miady ho an'ny fahalalahana, fa tsy ny natiora ara-batana, toy ny fahantrana, ny fivoahana sy ny fitsanganana, fa koa ny fahalalan'ny heviny, ny fomba fijeriny manokana ary ny filany manokana.
Mandeha mandritra ny fahamaotiana - fa eo foana ho an'ny ankizy
Afaka manomboka amin'ny tsiron'ny mozika izany ary miafara amin'ny Internet.
Mazava ho azy fa tsy mila miara-mipetraka amin'ireo ankizy ianao. Ny fitsipika napetraka dia afaka manampy amin'ny famoronana fahafahana ary miaro ny tanora na izany aza. Ny ray aman-dreny dia afaka manampy betsaka amin'izao fotoana izao: ny fahatsiarovana ny Abnabelung manokana.
Inona no mety ho tsara kokoa? Inona no nataon'ny ray aman-dreninao? Inona no tiako hatao sy ny zavatra hafa? Ahoana no fomba hanamafisako ny zanako mba hahatonga azy ho lasa olona manokana?
Ny tanora dia mila ny fahalalahany ary ny ray aman-dreny dia tokony hampiasa harato fandriam-pahalemana hisambotra ny zanany amin'ny traikefa ratsy.
Ary farany saingy tena manan-danja: Aza mandray na inona na inona manokana amin'ity dingana ity, fa ara-dalàna ny ankizy mba hikomy amin'ny ray aman-dreniny, ary amin'izao fotoana izao!
Ny batisan 'Andriamanitra dia tonga batemy | Fampianarana ankizy